CRDO/COCOON: metadata: Fond Denise Bernot, Ganan, 1968, piste A
Fond Denise Bernot, Ganan, 1968, piste A
Than Zaw Win
(création: 1968; mise à disposition: 2018-06-20; dernière modification de la notice: 2020-11-28)
Fonds Denise Bernot: autres langues de Birmanie
အသံသွင်းမှုကို ဗမာစကားပြောဆိုသူနှင့် ကနန်းဘာသာစကားပြောဆိုသူတို့ စကားအပြန် အလှန်ပြောဆိုခြင်းဖြင့်စတင်သည်။ ပထမတဦးက ဗမာဘာသာစကားဖြင့် ဒုတိယလူအား ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ နှင့် ဘဝဖြတ်သန်းပုံအကြောင်းများကိုမေးမြန်းသည်။ (၁၉၅၀ ခုနှစ်တွင်မွေးဖွားသည်၊ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၁၂ ခု၊ မွေးဖွားသည့်နေရာ-ဗန်းမောက် မြို့နယ်၊ နမ်ကာစ ကျေးရွာ၊ ငယ်စဉ်ကတည်းက မန္တလေးသို့ရောက်ရှိလာပုံ၊ အသက် ၇ နှစ်အထိ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းတွင် သင်ယူခဲ့ပုံ၊ ထို့နောက် အသက် ၁၅ နှစ်ထိ အစိုးရပညာသင်ကျောင်းတွင်တက်ရောက်ခဲ့ပုံ) ထို့နောက် (၆ မိနစ်ခန့်တွင်) မြန်မာစကားလုံးများကို ကနန်းဘာသာစကားဖြင့် ဘာသာပြန် ဆိုသည်။ (၉ မိနစ်နှင့် ၉.၄၅ မိနစ်ကြားတွင် အသံသွင်းထားမှုသည် မြန်နှုန်းမြင့်မားပြီး အသံသွင်းမှုကိုကောင်းစွာနားမလည်နိုင်ပါ။) ၉.၄၅ မိနစ်တွင် နောက်ထပ် အကြောင်းအရာ(သဘာဝဖြစ်စဉ်များ)၊ ဘာသာပြန်မည့် အကြောင်းအရာ နံပါတ်စဥ်များကိုလည်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ကြေငြာသည်။ ဘာသာပြန်မည့် စကားလုံးများစာရင်းကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ဗမာဘာသာဖြင့်ကြေငြာသည်၊ ထို့နောက် စကားလုံးတခုစီကို ကနန်း ဘာသာဖြင့် အကြိမ်များစွာအသံထွက်ပြသည်။ ထို့နောက် ဝေါဟာရများပါဝင်သော ဝါကျများဖွဲ့ပြသည်။ ဘာသာပြန်မည့် စကားလုံးများ စာရင်းသည် CNRS-EFEO-SOAS စံနမူနာစာရင်းမှ ထုတ်နုတ်ထားသည်ဟုယူဆရသည်။ အသံအရည်အသွေးအားနည်းသည်။ တခါတရံ မပီသပါ၊ နောက်မှဆူညံသောအသံများနှင့် ရောထွေးနေသည်။ (၃၀ မိနစ်ထိ) ကနန်းဘာသာစကားပြောပြသူသည် ကနန်းစကားလုံးတွင် ငှက်မွေးတောင်သဏ္ဍာန်ရှိ သောဒရင်ကောက်ပင် နှင့် ကောက်လှိုင်းစည်း စသောစကားလုံးတို့၏ ကွဲပြားခြားနားသော ဘာသာပြန်ချက်များကို ထောက်ပြပြောဆိုသည်။
The recording starts withaconversation betweenaBurmese speaker andaGanan speaker, where the first one asks questions (in Burmese language) to the second one about his identity and life trajectory (born in 1950 – Burmese year 1312– place of birth: Banmauk township, Namkasa village- Arrival in Mandalay in his youth ; monastic school until7years old, then public school until 15 years old) Then (at about6min.) Burmese words are translated in Ganan language (the recording speed gets accelerated between9min. and 9.45 min., and the recording is not understandable). At 9:45 min. the next theme (natural phenomena) is announced in English, as well as the numbers of items to be translated. The list of words to be translated is then pronounced in English, in Burmese, and each word is then pronounced in Ganan language, and repeated several times. Next, vocabulary is contextualized in sentences. The list of words to be translated seems to correspond to the list produced by the CNRS_EFEO_SOAS. The sound quality is poor (muffled), sometimes inaudible (background noise) at times (30 min.) The Ganan informer also pinpoints translation discrepancies on the Ganan words used to express 'fern' and 'sheaf'
La bande commence par une conversation en birman entre le locuteur de ganan et un homme birman. Ce dernier l'interroge sur son état civil toujours en birman et sur son parcours (né en 1950 — correspondance date birmane 1312—lieu de naissance Banmauk township, village Namkasa- Arrivée à Mandalay dans son jeune âge ; école monastique jusque7ans, puis école publique jusque 15 ans) Puis (vers 06:00), commence la traduction des mots birmans en ganan. La bande n'a pas une vitesse constante. Elle s'accélère vers 09' et la bande n'est plus compréhensible. A partir de 09:45, la thématique (phénomènes naturels) est annoncée en anglais, de même que les numéros des items à traduire. La liste de mots à traduire est ensuite prononcée en anglais, en birman et chaque mot est ensuite donné en ganan, répété plusieurs fois; puis il est mis en contexte (phrase). La liste des items à traduire semble correspondre à celle produite par le CNRS_EFEO_SOAS. Le son est de mauvaise qualité (sourd), voire inaudible (grésillement) sur certains passages (00:30) Le consultant ganan note aussi un problème de traduction sur les mots ganan utilisés pour signifier 'fern' (fougère) et 'sheaf' (gerbe, liasse).
ဗမာစကားပြောသူမှ ကနန်းစကားပြောဆိုသူအား ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ နှင့် ဘဝဖြတ်သန်းပုံအကြောင်းများကို မေးခွန်းမေးသည်။ (၆ မိနစ်ထိ) ထို့နောက် စကားလုံးများကို ကနန်းဘာသာစကားဖြင့် ဘာသာပြန်ပြသည်။ (၉ မိနစ်မှ ၉.၄၅ မိနစ်ထိ၊ အသံမြန်နှုန်းမြင့်မားပြီး အသံသွင်းမှုကိုကောင်းစွာနားမလည်နိုင်ပါ) နောက်ထပ် အကြောင်းအရာ(သဘာဝဖြစ်စဉ်များ)၊ ဘာသာပြန်မည့် အကြောင်းအရာ နံပါတ်စဥ်များကိုလည်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ကြေငြာသည်။ ဘာသာပြန်မည့် စကားလုံးများစာရင်းကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ဗမာဘာသာဖြင့်ကြေငြာသည်၊ ထို့နောက် စကားလုံးတခုစီကို ကနန်း ဘာသာဖြင့် အကြိမ်များစွာအသံထွက်ပြသည်။ (ဘာသာပြန်မည့်အချက်အလက်များစာရင်းသည် CNRS-EFEO-SOAS စံနမူနာစာရင်းမှ ရရှိသည်ဟုယူဆရသည်)
Un locuteur birman interroge, en birman, un locuteur de ganan sur son état civil et son parcours (jusqu'à6min.) Traduction de mots birmans en ganan (à partir de9min., la bande accélère et n'est plus compréhensible jusqu'à 09:45). La thématique (phénomènes naturels) est annoncée en anglais, de même que les numéros des items à traduire. La liste de mots à traduire est ensuite prononcée en anglais, en birman et chaque mot est ensuite donné en ganan, répété plusieurs fois. La liste des items à traduire semble correspondre à celle produite par le CNRS_EFEO_SOAS.
A Burmese speaker asks questions toaGanan speaker, about his identity and life trajectory (until6min.) Then, translation of words in Ganan (from9min. until 9.45 min., the speed is too high and the recording is not understanble). The next theme (natural phenomena) is announced in English, as well as numbers of items to be translated. The list of words to be translated is pronounced in English, in Burmese, and each word is then pronounced in Ganan, several times. The list of items to be translated seems to correspond to the CNRS_EFEO_SOAS standard list.
(code ISO-639: zkn )
[fr] Ancienne cote: crdo-BER_1968_ZKN_032-A_SOUND
Pour citer la ressource: https://doi.org/10.34847/cocoon.37693d76-07a4-3a46-8e89-303fa54dfb55
Bernot, Denise (researcher); Vittrant, Alice (depositor); Candier, Aurore (consultant); Khin Khin Zaw (consultant); Than Zaw Win (consultant); Labex ASLAN (CNRS, ENS, Université Lumière Lyon 2) (sponsor). Editeurs: Dynamique du langage & Laboratoire de langues et civilisations à tradition orale. Fond Denise Bernot, Ganan, 1968, piste A. Collections: "Collection Pangloss" et "Fonds Denise Bernot: autres langues de Birmanie" et "Les Archives Sonores de Denise Bernot (Birmanie/Burma)". 1968. Audio. Récupéré sur la plateforme COCOON, <https://doi.org/10.34847/cocoon.37693d76-07a4-3a46-8e89-303fa54dfb55>. (Accessed May 17, 2021.)